२०७५ पौष २ सोमबार, इलाम ।जिल्लामा ‘मेची पर्यटन महोत्सव’ यही पुस ५ देखि १६ गतेसम्म हने भएको छ । विभिन्न जातजातिको लोप हुन लागेको संस्कृतिको जगेर्ना, दुर्लभ जीवजन्तुको र पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्नका लागि उक्त महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ५२ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार विद्युत् खरीद सम्झौता भएका ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ५१ मेगावाट रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
डोजर किन्न होडबाजी
२०७५ पौष २ सोमबार, डोटी ।केआइसिंह गाउँपालिकाले रु ४१ लाखमा जेसिवी कम्पनीको नयाँ व्याकहोल लोडर(चक्कावाला डोजर) खरीद गर्‍यो । गाउँगाउँ र बस्तीबस्तीमा सडक पुर्‍याउने भन्दै गाउँपालिकाले डोजर खरीद गरेको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष २ सोमबार, बाँके । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन भएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत ‘मिसन मसुरो’ अभियान बाँकेमा प्रभावकारी देखिएको छैन । ... बाँकी अंश»
पूँजीबजार सुधारको माग राख्दै आमरण अनशनका कार्यक्रम सार्वजनिक
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौँ । पूँजीबजारको सुधारको माग राख्दै आएका शेयर लगानीकर्ता दबाव समूहले आजदेखि आमरण अनशनलगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष २ सोमबार, चितवन ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका २९९ ग्राहकलाई कालो सूचीमा राखेको छ । केन्द्रमा आठ हजार १६१ जना ग्राहक रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष २ सोमबार, लमही ।दाङको लमहीमा शीतभण्डार सञ्चालनमा आएपछि किसान खुशी भएका छन् । ... बाँकी अंश»
गोदरेजको मेडिकल रेफ्रिजेरेटरमा धेरैको आँखा
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौं । भारतको सुप्रसिद्ध गोदरेज कम्पनी भारतसँगै नेपालमा समेत ख्याती कमाएको कम्पनी हो । ... बाँकी अंश»
पत्रकारलाई स्रोतबाट टाढा राख्ने अर्थ मन्त्रालयको रणनीति !
२०७५ पौष १ आइतबार, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयका गतिविधिको सूचना दिने प्रणालीमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । ... बाँकी अंश»
सम्पति तथा भूमि कर संकलनको घरदैलो अभियानको पहिलो दिनमै १ लाख बढि राजश्व संकलन
२०७५ पौष १ आइतबार, गुल्मी । बाग्लुङ्गको गलकोट नगरपालिका वडा नं ७ मा आजबाट सम्पति तथा भुमि कर संकलनको घरदैलो अभियान सुरु गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
पञ्चायत पछिको तेस्रो लगानी सम्मेलन : डुईंङ विजिनेसको घाउ पुर्ने प्रयास
२०७५ पौष १ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले यही चैत १५ र १६ गते अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। यो ... बाँकी अंश»
हिरक महोत्सवमा जुट्यो १ करोड आर्थिक सहयोग
२०७५ पौष १ आइतबार, गुल्मी । गुल्मीको एक माध्यमिक विद्यालयमा संचालन भइरहेको हिरक महोत्सव मार्फत विद्यालयको लागि राम्रो आर्थिक जुटेको छ । ... बाँकी अंश»
पाँच महिनाको अवधिमा ११ लाख राजश्व संकलन
२०७५ पौष १ आइतबार, दार्चुला । छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलाले ५ महिनाको अवधिमा ११ लाख ३५ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलाले साउन देखि मंसिर सम्म उक्त राजस्व संकलन गरेको छोटी भन्सार कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख नर बहादुर बडालले बताए। ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष १ आइतबार, विदुर । चरम गरीबीले पिल्सिएका विदुर नगरपालिका–५ का २७ वर्षीय बालकृष्ण पनेरुले जीवनमा धेरै हण्डरहरु बेहोर्नुपर्‍यो । सानो छँदा नै घरको मियोका रुपमा रहेका बाबुको मृत्युपछि गाउँमा मेला, मजदूरी गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गर्नुभएका पनेरुले एसएलसीपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न धेरै कष्ट उठाउनुपर्‍यो । ... बाँकी अंश»
ठेकेदारको लापरवाहीका कारण हुलाकी सडकको निर्माण ठप्प
२०७५ पौष १ आइतबार, परासी । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पश्चिम नवलपरासीस्थित हुलाकी सडक निर्माण कार्य एक वर्षदेखि ठप्प छ । सदरमुकाम परासीदेखि नारायणचोक जोड्ने करीब १३ किलोमिटरको सो हुलाकी मार्गलाई कालोपत्रे बनाउने गरी निर्माण थालिएकामा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष १ आइतबार, जाजरकोट । डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–८ का सर्जन पहाडी नेपालगञ्जबाट नुन बोकेर घर ल्याएको पुरानो याद आफ्ना नाति नातिनालाई सुनाउने गर्छन् । एक महीना लगाएर नेपालगञ्जबाट नुन बोकेर घर पुर्‍याएको कथा सुन्न पाउँदा अहिले उनका नातिनतिनाहरु अनौठो मान्छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष १ आइतबार, गलकोट ।बागलुङ जिल्लाका तीन रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय सरकारले रु चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष १ आइतबार, काठमाडौँ । नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडले करिब १६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरेको मुनाफाबाट पाँच प्रतिशत शेयर लाभांश र दश दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । ... बाँकी अंश»
खरदारदेखि उपसचिवसम्म १४ हजार पदमा विज्ञापन !
२०७५ पौष १ आइतबार, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेकाहरु निकै अलमलमा छन् । कहिले दुई वर्षसम्म लोकसेवाले विज्ञापन खुलाउँदैन भन्ने भ्रम छरिरहेको पाइन्छ त कहिले अब भारी मात्रामा विज्ञापन खुलाउँदैछ भन्ने आउँछ । ... बाँकी अंश»
मिलेनियम ट्रेकमा जोडिदै दरबार र गुफा
२०७५ मङ्सिर २९ शनिबार, पोखरा । मध्यपहाडी क्षेत्रको नेपालकै पहिलो पदयात्रा मार्ग स्रहशाब्दी मार्ग (मिलेनियम ट्रेक)मा पर्ने ऐतिहासिक ढोर दरबार र मिलेनियम गुफालाई जोड्दै यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको पहल शुरु भएको छ । ... बाँकी अंश»